Myanmar 18 Plus: ရမ္မက်ရဲ့ ညတွေပြီးရင် အချစ်ရဲ့ မနက်ဖြန်တွေ လာမယ် (၂)
ရမ္မက်ရဲ့ ညတွေပြီးရင် အချစ်ရဲ့ မနက်ဖြန်တွေ လာမယ် (၂)
ပထမ ခြေလှမ်း တနင်္လာနေ့ မနက်….." ဝေလင်း..မောနင်း…."" ဟာ ကိုမင်း မောနင်း….."" လန်းဆန်းလို့ ပါလား …"" ဆိုပါတော့ဗျာ..နောက်တော့အေးဆေးပြောပြမယ်………."တနင်္လာ နေ့ တွေတိုင်းဟာတော့ အလုပ်တွေ များကြတာ များတယ်…။ နေ့ ခင်းကျတော့မှပဲ…ကိုမင်း နဲ့ ပြန်တွေ့ တော့.." ညနေဖက် ဆိုင်ထိုင်ရအောင်လေ……."" မနက်ဖြန် အလုပ်ဆင်းရမယ်လေ…."" ဝေလင်းကတော့ လုပ်တော့မယ်…….ph လေ… ပြည်ထောင်စုနေ့ ကို .."" ဟာဟုတ်သားပဲ…..မေ့နေတာ…ဒါဆိုရတယ်လေ…"" အိမ်မှာ..သောက်မလား…..မြတ်မြတ်ကိုပါ ခေါ်လိုက်ပေါ့ "" အင်း..မေးကြည့်လိုက်မယ်…"" အိုကေပြီးနော်…ဒါဆို….ဝင့်ဝါကို ငါဖုန်းဆက်ပြီး စားစရာလေးတွေ စီစဉ်ခိုင်းလိုက်တော့မယ် "" အင်း…..အဆင်ပြေတယ်…ကျွန်တော်လဲ ပြီးရင် မြတ် ကို ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်…"
" မြတ်..ကိုမင်းတို့ က သူတို့ အိမ်မှာ ဒီညနေ သောက်ကြမလို့ တဲ့ မနက်ဖြန် ပိတ်တယ်လေ…"" ကို့ ကို ပြောမလို့မေမေ့ အိမ်မှာ ဒီည သွားအိပ်မလို့သားပါပါတယ်.."" ဘယ်လိုဖြစ်လို့ လဲ….."" ပြည်ထောင်စုနေ့ ဆိုတော့…သူမြေးကို ရပ်ကွက်က လုပ်တဲ့….. ကစားပွဲတွေ ပြမလို့ တဲ့ "" ကို့ လဲ ကြိုမပြောဘူး..ဟိုမှာ ကိုမင်းတို့ က စီစဉ်နေပြီ ..ဖျက်လို့ မကောင်းဘူးလေ.."" ရပါတယ် ကိုပဲ သွားလိုက်ပေါ့ မြတ်နဲ့ သားပဲ သွားအိပ်လိုက်မယ်…ပွဲဈေးတန်းလဲ ရှိတယ်လေ…"" ကို မလိုက်လို့ ကော ရလို့ လား တော်ကြာ မြတ် အမေက ပြောနေဦးမယ်.."" ရတယ် မြတ် ဖာသာ ပြောလိုက်မယ် ကို့ ဖာသာသွား အရမ်းလဲ သောက်မနေနဲ့ ဦး..."" အင်း ပြီးရော မနက်ကျမှ ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်…."" အင်း…အိမ် ပြန်လာဦးမှာလား…."" မြတ်ကကော…"" မြတ်က အလုပ်ကနေ ပဲ သားကိုကြိုပြီး သွားလိုက်တော့မယ် ဟိုမှာ မြတ် အဝတ်အစားကော သားအဝတ်အစားတွေကော ရှိတာပဲ…"" အင်း တစ်ခုခုလိုတာရှိလဲ ဖုန်းဆက်ဦးနော်…."" အင်း ဒါဆို ဒါပဲနော်..ဘိုင့်.."" အင်း..ဘိုင်.."ကျွန်တော်လဲ မြတ် မပါဘူးဆိုတာ ကိုမင်းကို သွားပြောတော့ ရတယ် အိမ်မှာပဲ..အိပ်ပါပြောတော့ ။အခြေအနေ အရလို့ တော့ ပြောထားရတယ်…သူများအိမ်တော့ တစ်ခါမှ မအိပ် ဖူးဘူးရယ် ။ ဒီလိုနဲ့ ညနေ ၅နာရီ ရုံးဆင်းတဲ့ အချိန်ကိုရောက်လာတော့ ကျွန်တော်နဲ့ကိုမင်း…..နှစ်ယောက်သား..ကိုမင်း အိမ်ကိုချီတက်ကြတယ် ။ ကိုမင်းတို့အိမ်နားမှာက….နိုင်ငံခြားအရက် သီးသန့် ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ရှိတော့ အဆင်ပြေတယ်….။ ဗော့ကာ နှစ်လုံး….24/7 mini-mart ကနေ ခရမ်ဘယ်ရီဂျူ့ စ် သုံးဗူးလောက်နဲ့လိမ္မော်ရည်ဗူး နှစ်ဗူးနဲ့ ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားတယ်…။ပြီးတော့ ရေခဲတုံး အထုပ်တွေကလဲလေးထုပ်ဆိုတော့ အဆင်ပြေပြီလေ…။ အိမ်က ရေခဲသေတ္တာဆိုတာက….ရေခဲ အဲလောက်မှ မရတာဆေးလိပ်ကလဲ…နှစ်ဗူးပါသေး ။ကိုမင်း အိမ်ရောက်တော့ ကိုမင်းထုတ်ပေးတဲ့..အိမ်နေရင်း ပုဆိုးဟောင်းလဲပြီးခြေလက်လေး ဘာလေးဆေးပေါ့ ။ ဗော့ကာနဲ့ ဂျူ့ စ် ရောထားတဲ့ ခွက်ကလေး ကိုယ်စီကိုင်လို့ ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက် စကားတပြောပြောနဲ့ ပေါ့.နည်းနည်လေးကြာလာတော့.. ရုပ်ရှင်ကားကြည့်ဖို့ သဘောတူညီမှု ယူလိုက်တယ်…။ အရှိန်ကတော့ သိပ်မရောက်သေးပါဘူး အမြည်း သစ်သီးနဲ့အသားကြွတ်ကြော်ရယ်ဝက်သားအချိုသုပ်ရယ် လောက်ပါပဲ…။ အသီးကတော့ အစုံပေါ့……။စစ်ကားပါဗျာ….အဟောင်းဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်
အရမ်းကြိုက်တဲ့ မင်းသားပါတဲ့ Save the private Ryan ဆိုတဲ့ ကား အရမ်းကောင်းတော့ သုံးယောက်သား ငြိမ်ပြီး ဗော့ကာ ခွက် ကိုယ်စီနဲ့။ ဇာတ်ကားပြီးတော့ အချိန်ကတော့ ၁၀ နာရီလောက်ရှိနေပြီ ။.ဗော့ကား နှစ်လုံးမှာ…တစ်လုံးကတော့ ကုန်သွားပြီ နောက်တစ်လုံးကတော့ သုံးပုံတစ်ပုံလောက်တော့ ကုန်နေပြီ…။ ဆေးလိပ်ကိုယ်စီနဲ့မှိန်းပြီး ယူနေတဲ့ အချိန်ပေါ့ ။ ဝင့်ဝါကတော့ ဆေးလိပ်မသောက်တတ်ပါ…..။ ဝင့်ဝါ ထသွားတော့ မင်းမင်းက လှမ်းမေးတယ်…..။" ဘယ်သွားမလို့ လဲ.."" အင်္ကျီသွားလဲမလို့ …"" အင်း..အတွင်းခံတွေ ချွတ်ခဲ့နော်.."" ဟာကိုမင်းကလဲ….."ကျွန်တော် အားနာလို့လှမ်းပြောတော့ ကိုမင်း က မျက်စိမှိတ်ပြတယ် ။ ဝင့်ဝါ ကတော့ အဝတ်အစားလဲဖို့ ထွက်သွားလေရဲ့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်လဲ ဆေးလိပ်သောက်လိုက် ဗော့ကာ မော့လိုက်နဲ့ ပုလင်းက လက်သုံးလုံးလောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်..။" ဝေလင်း ခဏလေး…."" ရတယ်…ကိုမင်း..အေးဆေးလုပ်…"" ဒီမှာ အိပ်မှာ မဟုတ်လား …" ပြန်ရင်ကောင်းမလားလို့ လူကတော့ ကောင်းနေပြီ.."" မပြန်နဲ့ တော့ မင်း မိန်းမလဲ အိမ်မှာ ရှိတာ မဟုတ်ဘူး ဒီမှာပဲ အိပ်တော့ ခေါင်းအုံးတွေ အပိုရှိပါတယ် "" ကိုမင်းတို့ အဆင်မပြေ ဖြစ်မှာ စိုးလို့ ပါ.."ကိုမင်း အိမ်သာဘက် ထွက်သွားတော့ ဝင့်ဝါ အခန်းထဲကနေ ထွက်လာတယ်…။ " ဟာ…မိုက်တယ်ဗျာ…"အကျီင်္ အရှည်လို ဟာမျိုးကို တစ်ခုထဲ ဝတ်ထားတာ…။ ဖင်လုံရုံလောက်ပဲ ဒါတောင် ကျွန်တော် ရှေ့ကနေမြင်ရတာ…. ပေါင်သားလေးတွေ က ဝင်းဖန့် နေတာပဲ အအမာရွတ်လဲ မရှိဘူး..ပေါင်တံတွေက စင်းပြီး တင်းနေတာပဲ ။ လူကပဲ ကောင်းနေလို့ လားတော့ မသိဘူး ။ ကိုယ့်လူရင်း မိန်းမရဲ့ သူငယ်ချင်းကိုကြည့်ပြီး
လီးတောင်လာတယ်။ ဆီးကလဲ နည်းနည်းသွားချင်တယ် ။ တောင်ကလဲ တောင်လာတော့ မနေနိုင်တော့ဘူး ။ကိုမင်းလဲ အိမ်သာဖက်က ပြန်လာတာလဲတွေ့ ကော…အိမ်သာဖက်ကို ပြေးရတော့တာပဲ ။အိမ်သာထဲ ရောက်တော့မှ နည်းနည်းကြာတော့မှ တင်းနေတာလေးတွေ လျှော့သွားတယ် ။တက်လာတာက အရက်ရှိန်…ထိုင်နေတုန်းက သာ သောက်ကောင်းကောင်းနဲ့ သောက်နေတာ ထပြီး အပေါ့ သွားပြီဆို ..သိသာပြီ..ရိပ်ရိပ် နဲ့ တက်လာတာ…ပြီးတော့ မြင်ယောင်တာက ဝင့်ဝါရဲ့ ပေါင်တံ…။ အတွင်းခံပါတော့ သိပ်မသိသာဘူး….အောက်ကတော့ တင်းနေတယ် ။သောက်နေတဲ့ နေရာရောက်တော့ ဝင့်ဝါ က မျက်နှာချင်းဆိုင်
ထိုင်ခုံမှာ ခြေထောက်ချိတ်ပြီး ထိုင်နေတာ သေချာသလောက်ရှိတယ်…အတွင်းခံ မဝတ်ထားတာ…။ တင်သားတစ်ခြမ်းပေါ်နေတဲ့ အနေအထားဆိုတော့….မျက်လုံးကတော့ အားနာပါးနာနဲ့လွှဲလိုက်ပါတယ် ။ တစ်ခါမှ သူများ သားမယားပေါ် အဲလို ပေါ်တင်ကြီး မကြည့်ဖူးပါဘူး ။ အခုမှ ထူးထူးဆန်းဆန်း လာဖြစ်နေတယ်.။ ကိုမင်းသိရင်တော့ သေပြီဆရာပဲ..လူကလဲလန့် နေတယ် ။ကိုမင်း မျက်နှာကြည့်တော့လည်း အရမ်းတော့ မမူးပေမယ့် မှန်နေပုံပဲ…။ ကိုယ်ကိုကိုယ်တိုင်လဲ မှန်နေတာပဲလေ ။သောက်ထားတာ နည်းမှမနည်းပဲ။သောက်နေကျမို့ သာ အဲလောက်တင်းခံနေတာ…အဲ့အချိန်မှာ….ကိုမင်းက ခွက် သုံးခွက်ကို ဆတူစီ မျှထည့်ပြီးတော့ နောက်ဆုံးလက်ကျန် လိမ္မော်ရည်နဲ့ ရောပြီးတော့ သုံးယောက်သား ချီးယားစ် လုပ်ကြတယ်…အမြည်းကတော့ သစ်သီးတွေကတော့ ကုန်သလောက်ပဲ….။အသားသုပ်ကတော့ ကျန်သေးတယ် ဗော့ကာ နဲ့ သိပ်မလိုက်လို့ သိပ်မစားဖြစ်ကြတာလဲပါတယ် ။ခွက်ကုန်မော့ပြီးတော့ ကိုမင်းက ဆေးလိပ်တစ်လိပ် မီးညှိပြီး မတ်တပ်ရပ်တယ် ။" ဝေလင်း မြန်မာလား တိုက်ဂါးလား.."" ဗျာ…"" ငါသွားဝယ်မလို့မင်းဘာသောက်မှာလဲ ဝင့််ဝါကတော့ မြန်မာ…"" တော်ပြီလေ ကိုမင်း ဒီမှာ နှစ်လုံးတောင်ကျနေပြီ……"" သောက်စမ်းပါကွာ..မနက်ဖြန် ပိတ်ရက်ကြီးကို …မင်းနေခဲ့.."" ဘယ်မှာ ဝယ်မှာလဲ ဆယ်နာရီပဲ ခွဲနေပြီ….."" ခုနက ဂျူးစ် ဝယ်လာတဲ့ဆိုင်ကလေ…ဒီမှာပဲနေခဲ့ ဝင့်ဝါတစ်ယောက်ထဲ ငါက ရတယ် ငါ့ရပ်ကွက်.."" ပုလင်းတွေက လေးနေမှာ ကိုမင်းရဲ့.."" ရတယ်နေခဲ့ " ဆိုပြီး ပိုက်ဆံအိတ် ယူပြီးထွက်သွားတော့……….ကျွန်တော် တံခါးဝ ထိ လိုက်ပို့ လိုက်တယ်.." ဝေလင်း…."" ဗျာ.."" ဝင့်ဝါကို ကူပြီး ပြီးတဲ့ ဟာလေးတွေကို သိမ်းထားလိုက်ပေါ့ မနက်ကျတော့မှ ဆို ရှုပ်ပွနေမှာစိုးလို့""စိတ်ချ ကိုမင်း ကျွန်တော် လုပ်ထားလိုက်မယ်…"ကျွန်တော်လဲကိုမင်း သွားတာနဲ့ပြီးတဲ့ သစ်သီး ပန်းကန်လေးတွေကို အမှိုက်တွေစု …ပန်းကန်တွေ ထပ်နဲ့ လုပ်နေတုန်း..ဝင့်ဝါက တီဗီ စင်ကို လှည့်ပြီးတစ်ခုခု လုပ်နေတာကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ခုနက ကြည့်တဲ့ အခွေကို စက်ထဲကနေ ထုတ်ပြီး အိတ်ထဲ ပြန်ထည့်နေတာ တွေ့ တယ် ။အဲဒီမှာ ဒုက္ခ ရောက်တော့တာပဲ……အခွေထားတဲ့ နေရာကို ဝင့်ဝါပြန်ထားတော့ လေးဖက်ကုန်းပုံစံ..နဲ့ ဆိုတော့ ဝတ်ထားတဲ့ ဂါဝန်လို အကျီင်္ရှည်က အပေါ်ကို တက်သွားတော့….အောက်မှာ ပေါ်နေတာက..ဝင့်ဝါရဲ့ စောက်ဖုတ်လေး ပန်းနုရောင်သန်းနေတာပဲ…။ ကျွန်တော် မနေနိုင်တော့ဘူး…။ ဝင့်ဝါ..ရှိရာဆီသွားပြီး..နောက်ကနေ ဝင့်ဝါ…ပန်းနုရောင်လေးကို အားရပါးရ….ကုန်းလျှက်မိတယ် ။ ဝင့်ဝါရုန်းမှာ စိုးလို့ဝင့်ဝါရဲ့ ခါးလေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ စုံကိုင်ပြီး မှုတ်နေမိတယ်…။ ဖင်ကြားတွေကိုကော.တစ်ခါမှ…မလုပ်ဖူးပေမယ့် လျှက်ပေးမိတယ် ။ပြီးတော့ ဆွဲစုပ်တယ် ဖုတ်ဖုတ်ရဲ့ နုတ်ခမ်းသားတွေကို ကစ်ဆင်တွေဆွဲတယ်…။ ကျွန်တော် နားထဲမှာ ကြားရတာက …ဝင့်ဝါရဲ့ငြင်းဆိုတဲ့…..အသံတွေ ကြားရလိမ့်မယ် ထင်တာ သက်ပြင်းချသံတွေ……တွန့် တွန့် သွားတာတွေ……….. အံကြိတ်ပြီးငြီးတွားသံတွေပဲ ကြားရတယ်…။ဝင့်ဝါတစ်ယောက်..စိတ်လာနေပြီ ကျွန်တော်သိတယ်။ပုဆိုးကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ချွတ်ချပြီး…အတွင်းခံကို ချွတ်မယ် လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ..ဝင့်ဝါက ကိုယ်ကို ပြန်ထလိုက်ပြီး ရုန်းထွက်သွားတယ်…။ ကျွန်တော် ကြောင်သွားတယ်…ခုနကတော့ ငြိမ်နေပြီးတော့………." ကိုဝေလင်း……"ကျွန်တော်..ဝင့်ဝါ မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်တယ်..။ မျက်နှာလေးက အတင်း တည်ထားတဲ့ ပုံ………." ဝင့်ဝါကို အရမ်းလုပ်ချင်လား.."ကျွန်တော်..ဖြေလိုက်တယ်..ခေါင်းငြိမ့်ပြီးတော့ ဝင့်ဝါကို လုပ်ရရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ…ကျွန်တော်..တော်တော် လိုချင်နေပြီ……အတွင်းခံအောက်ထဲက ကျွန်တော့််ကောင်တောင် တော်တော်အောင့်နေပြီ ။" ဒါဆို ခဏစောင့်………."ကျွန်တော် ငိုင်ပြီး ပုဆိုးကို ပြန်ဝတ်လိုက်တယ် ။စိတ်ကလဲ အခုမှ.ပြန် အသိဝင်လာတယ်..ကိုမင်းသိရင်တော့ သွားပြီ..။ နောက်ပြီး မြတ်..ဝင့်ဝါသာ ပြောလိုက်ရင်..လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းလို ခင်ရသူရဲ့ မိန်းမပြီးတော့ မိန်းမရဲ့ သူငယ်ချင်း။ အဲအချိန်မှာ တံခါးဖွင့်ပြီး..ဝင်လာတာကကိုမင်း ။ကျွန်တော် ကျောက်ရုပ်ကြီးလို ထိုင်နေမိတယ်…။ကိုမင်း လက်ထဲက… ဘီယာ ပုလင်းတွေကို…..ဝင့်ဝါက သွားယူနေတဲ့ အသံကြားတယ် ။ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ..မသိသေးဘူး…တော်တော်ကြီးကို တုန်လှုပ်သွားတယ်..။ ဝင့်ဝါက ကိုမင်း ဝင်လာတဲ့ အချိန်မှာ..ကိုမင်းကို မျက်စိ မှိတ်ပြလိုက်တာကိုတော့ ဝေလင်းတစ်ယောက် မသိလိုက်တာကတော့သေချာသလောက်ပေါ့..။
ကိုမင်း..သောက်တဲ့နေရာစီပြန်လာတော့…ကျွန်တော်ကတော့ မျက်လုံးချင်း မဆုံမိအောင်ရှောင်နေရတယ်..။အားလည်းနာတယ်….။ ခဏနေတော့ ဝင့်ဝါ လဲ ဖန်ခွက်တွေနဲ့ ရောက်လာတယ်….။" ဝေလင်း..ပြောပါဦင်္း "" ဗျာ..."ကျွန်တော် တော်တော်ကြောင်သွားတယ်….။" မင်းနဲ့ မင်းမိန်းမနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ ည က ကိစ္စက ခေါင်းထဲရောက်လာတယ် ။လူက စိတ် က တခြားဖက် ရောက်သွားတယ်.။ မျက်လုံးထဲမှာ မြင်လာတာက မြတ်ရဲ့ ဆရာ့ မျက်နှာကြီး…ပြီးတော့ မြတ်ရဲ့ တီဗီရှေ့မှာကုန်းပြီး အလုပ်ခံနေရတဲ့ ပုံ….တီဗီထဲက ဂျပန်မနဲ့အဖြူကောင်ရဲ့ ဆွဲချက်တွေ….ဘာမှ ပြန်ပြောမနေပဲ….ရှေ့မှာ ရှိတဲ့ ဘီယာခွက်ကိုကိုင်ပြီး တစ်ချက်ထဲ ချပလိုက်တယ် ။ ကုန်တော့ မကုန်ပေမယ့် လက်သုံးလုံးလောက်တော့ ခွက်ထဲ ကျန်နေသေးတယ်…အေးစက်နေတဲ့ ဘီယာက အကြောတွေကို အေးခဲသွားစေတယ်…။ ပုလင်းကို ကိုင်ပြီး…..ခွက်ပြည့်အောင် ပြန် ဖြည့်လိုက်တယ် ။ အဲ့ဒီတော့မှ ကိုမင်းတို့ လင်မယား ခွက်ကိုင်တာ တွေ့ တယ် ။" ကဲ..ဝေလင်း ရေ ချီးယာ့စ် "" ကိုဝေလင်း ချီးယာ့စ် "" ချီးယာ့စ် ဗျာ…."ဘီယာသုံးလုံးကို သုံးယောက် ကုန်တဲ့ အထိသောက်ပြီးတော့မှ..စကားဆက်ကြတယ် ။ ဝင့်ဝါက အရင်ပြောတာပါ…။" ကိုဝေလင်း.."" အွမ်းပြော…ဝင့်ဝါ.."လေသံတွေက မလေးအောင် သတိထားရတယ် ။ ခုနက လန့် သွားလို့ လား မသိဘူး သိပ်မမူးပဲနဲ့ထုံဝေဝေ ဖြစ်နေတယ် ။" မြတ်..နဲ့နေ့ လည်က ဖုန်းပြောဖြစ်တယ်…"" အင်း.."" ကိုဝေလင်းနဲ့ဟိုနေ့ ဖြစ်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ပြောတယ်.."" အကုန်ပြောပြတာလား "" အင်း ဝင့်ဝါ အတင်းမေးလို့ ပါ သူပြောတာ ကိုဝေလင်း မိန်းမအကြောင်းလဲ သိသားနဲ့ ရှက်တတ်တာကို… အဲဒီတော့ ဆရာ့အကြောင်းပါ ပါတယ်.."" ဟာ...ဒီမိန်းမကတော့ အကုန် လျှောက်ပြောနေတော့တာပဲ…"" မြတ် ကို အတင်းမေးလို့ သူပြောတာပါ.."" ဒါ ..သူပြောစရာလား ရှက်စရာကြီးကို….."" ဝင့်ဝါ..ကို မေးပါဦးမယ်..ဝေလင်းတို့ ကိစ္စက ဘယ်လိုလဲ ကို့ ကိုကော ပြောပြလေ…ဝေလင်း မင်းက လျှိုတယ်ပေါ့လေ "" ကိုမင်း ကို ပြောမလို့ ပဲ ..နေ့ လည်က လူတွေ ရှိနေတော့ မကောင်းဘူးလေ "" အင်း..ဟုတ်တာပဲ..အခုပြောပြလေ…..ငါလဲ သိရတာပေါ့…."" ဝင့်ဝါသိရင် ဝင့်ဝါပဲပြောပြလိုက်ပါ….ကျွန်တော်ကတော့ မပြောတော့ဘူး "" အင်း ကို့ ကို ဝင့်ဝါပဲ ပြောပြမယ် ကိုဝေလင်းကတော့ မှားတဲ့နေရာရှိရင် ထောက်ပေးပေါ့ "ဝင့်ဝါကို ကိုမင်းကို ပြောပြနေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော် လဲ နားထောင်နေရင်းနဲ့လီးက ပြန်တောင်လာတယ် ။ကိုမင်း ဝင့်ဝါကို ကြည့်ပြီး ဘီယာသောက်လိုက် နားထောင်လိုက် လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ…ကျွန်တော်က ဝင့်ဝါရဲ့ပေါင်တံ ဝင်းဝင်းလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ပြစ်မှားနေတာ…။ တစ်ချက် တစ်ချက် လှမ်းကြည့်တဲ့ ဝင့်ဝါမျက်လုံးတွေမှာ သူသိတယ်ဆိုတဲ့ အရိပ်အရောင်တွေ တွေ့ နေရတယ်……..သူသိနေတယ်လို့ ခံစားရလေ ။ကျွန်တော်ပိုပြီး…တောင်လာလေ ဖြစ်နေတယ် ။ စိတ်ကိုလဲ တစ်ခြားကို ပြောင်းလို့ မရဘူး။စိတ်က အာရုံတွေက များနေတယ်…။ သောက်ထားတာက တစ်မျိုး……ဝင့်ဝါပြောပြနေတဲ့…တစ်ချက်တစ်ချက်…..ဆရာဆိုတဲ့ နာမည်..ကြားရင်တစ်မျိုး ..ဝင့်ဝါကို စိတ်လာတာက တစ်မျိုးနဲ့ လူလဲ…..လှိုင်းစီးနေရသလိုပဲ ဘေးရောက်သွားလိုက် နိမ့်ဆင်းသွားလိုက်…..မြင့်တက်သွားလိုက်နဲ့ ..ဝင့်ဝါ စကားဆုံးတော့…ကိုမင်းက စလာတယ် ။" ဝေလင်း မင်းကို ငါမေးရင် မင်းဖြေမလား……."" မေးကြည့် ကိုမင်း.."" မင်း အဲ့ညက ဆရာ့နဲ့ မြတ်ကို မြင်ယောင်ပြီး လုပ်တော့….ဘယ်လိုခံစားရမလဲ.."" ဝင့်ဝါရှိနေတာ ဖြစ်မလား.."" ဝေလင်း..အိမ်ထောင်သည်တွေပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့ ရှော့ကို မရှိတာ…အမှန်အတိုင်းပဲပြော…"" မြတ်နဲ့အဲ့ညက လုပ်တော့ ဆရာနဲ့ မြတ်နဲ့ လုပ်နေတာကို တွေးကြည့်လိုက်တာ.. ဘယ်လို ပြောရမလဲ ပထမတော့ ဒေါသထွက်တယ်…ခဏပဲဗျ…. မပြီးအောင် မနည်းထိန်းရတာ..မြတ်နဲ့ အဲလို ပြောပြီး နေရတာက..ပိုပြီး လုပ်လို့ ကောင်းနေတယ်.."" မြတ် ကကော .."" သူလဲကောင်းတာ ကျွန်တော် သိတယ်.."" မြတ်က အဲ့အချိန် မင်းလုပ်ပေမယ့် သူ့ ဆရာ..တကယ် လုပ်နေသလို ခံစားလိုက်လို့ နေမယ်.."" ဟုတ်လောက်တယ်..ကိုမင်း..မြတ်ပြီးတာ ခဏခဏပဲ….ပြီးတော့..ကိစ္စတွေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ဖက်အိပ်ကျတာ အရင်ကထက် ပိုနွေးထွေးပြီး ပို နီးကပ်သွားသလို ခံစားရတယ် "" အတွေ့ အကြုံ အသစ်ပေါ့ ဝေလင်းရာ…"" အင်း ကျွန်တော်လဲ အဲဒါကို ကြိုက်တယ်…ထင်တယ် "" အကယ်လို့မြတ်က ဆရာနဲ့အပြင်မှာ တကယ် လုပ်ဖြစ်ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ.."" ကျွန်တော် မပြောတတ်ဘူး..ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် နောက်မှ သိရရင်တော့ ဒါ ဖောက်ပြန်တာပဲ "" မင်း ကို အသိပေးပြီး လုပ်ရင်ကော…"" အဲဒါတော့ ကျွန်တော် မသိသေးဘူး..ကိုမင်း ခဏ ..ရေအိမ် သွားချင်လာလို့ .."" အင်း..သွား….."" ကိုဝေလင်း သွားတုန်း ကိုမင်း ကို ဝင့်ဝါ တိုင်စရာရှိတယ်.."ကျွန်တော် တင်းနေတဲ့ ဆီးအိမ်တောင်…ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိအောင် ပူထူသွားတယ် ။" သွား..ဝေလင်း သွား………"ကျွန်တော်လဲ ဘယ်လို လုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့ရေအိမ်ကို ခပ်သုတ်သုတ် သွားပြီး…လျှော့ချလိုက်တော့ တင်းနေတာတွေက ပြေသွားပေမယ့် စိတ်တွေကတော့ တင်းကြပ်လာတယ် ။ ဒီအချိန်လေး….မရှိခဲ့ရင် ကောင်းမှာပဲ…
ခပ်ထွေထွေ နဲ့ အိမ်ရှေ့ ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှောက်လာတော့…ပထမဆုံးတွေ့ ရတာက ကိုမင်းရဲ့ မျက်နှာ…" လာဝေလင်း ငါ့ကိုကူဦး……."" ဗျာ…."" ဘီယာပုလင်း လက်ကျန်တွေ ကူသယ်ပေး နေရာပြောင်းမယ်.."နောက်ဆုံးရောက်သွားတာက…သူတို့ အိပ်ခန်းစီကို…သုံးယောက်သား ပုလင်းကိုယ်စီ ကိုင်ပြီးခုတင်ဘေးက စားပွဲပုလေးမှာ.. အမြည်းတွေကို တင်ပြီး...သူတို့ နှစ်ယောက်ကတော့ ခုတင်ပေါ်မှာထိုင်တယ်..။ကျွန်တော်ကတော့ မတ်တပ်ရပ်လို့ဘယ်မှာထိုင်ရမှန်း မသိသေးဘူး.." လာ ကိုဝေလင်း ဒီမှာထိုင်…"ဝင့်ဝါပြတဲ့နေရာကို
ကြည့်တော့ ခုတင် ခြေရင်းဖက်…..သုံးယောက်သား…ဘီယာကို ပုလင်းလိုက်ကိုင်ပြီး " ချီးယာစ်. "လုပ်ပြီး သောက်ကြတယ် ။ ဘာအတွက် သူတို
့နှစ်ယောက် ချီးယာစ် လုပ်မှန်း ကျွန်တော် မသိဘူး ။ ဘီယာ လေးငါးငုံ ငုံပြီးတော့…နှစ်ယောက်အိပ် ခုတင်ရဲ့ အလယ်တည့်တည့်ကို ဝင့််ဝါက…နေရာရွှေ့ သွားပြီးတော့…ပက်လက်လှန်ချပြန်တယ်…..ပြီးတော့ ဝင့်ဝါရဲ့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အကျီင်္ အရှည်ကို ဆွဲမပြီး.ဗိုက်သားနေရာလောက်မှာ…အောက်နားစတွေကို လှန်တင်ထားတယ် ။ကျွန်တော် ကြည့်လိုက်မိတဲ့ ပုံက ခုတင်ပေါ်မှာ ကိုယ်က တစောင်းဖြစ်နေတယ်..။ကျွန်တော် ခြေထောက်တွေက….ခုတင်အောက်ကို ချထားတော့…ခန္ဓာကိုယ်က နေရာမကျဘူး ဖြစ်နေတယ်.။အဲဒီအချိန်မှာ သတိဝင်လို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ ဝင့်ဝါ ယောင်္ကျား ကိုမင်းကို ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ကို လှမ်းကြည့်နေတယ်……။ကျွန်တော် ဝင့်ဝါကိုကြည့်လိုက်တော့….မျက်လုံးလေးတွေ မှိတ်ထားတယ် ။ လောကကြီး ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလဲ ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော် ဘာကိုမှ မမှန်းဆ တတ်ခဲ့ဘူးဗျာ..။" ဝေလင်း….."" ဗျာ ကိုမင်း…"" ငါ မရှိတုန်းက ဝင့်ဝါကို ပြုစုခဲ့တာ လေး ကောင်းတယ် ဝင့်ဝါက ပြောတယ်.."" ကျွန်တော်…."" အခုဆက်လုပ်ပေးလိုက်ကွာ……ငါခွင့်ပြုတယ်.."" ကိုမင်းရာ မကောင်းဘူး…."" မူမနေစမ်းပါနဲ့ငါ့ကောင်ရာ…လုပ်မှာလုပ်ပါ..."ကျွန်တော်.ဝင့်ဝါရဲ့ လှန်ထားတဲ့.ခါးအောက်ပိုင်းကို ကြည့်လိုက်တော့ပြောင်တင်းနေတဲ့ ဆီးခုံ မို့ မို့ လေးရယ်ပြီးတော့ စေ့ထားတဲ့ ပေါင်လုံးလေး နှစ်ဖက်က.ဘယ်ပန်းချီရေးလို့ မမှီ..လို့ ပဲ .ပြောပါရစေတော့..။ကျွန်တော်..ခုတင်ပေါ်ကို လှမ်းတက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ….ဝင့်ဝါရဲ့ ခြေထောက်တွေက…ကွေးသွားပြီး…ပက်လက် ပေါင်ကားတဲ့ ပုံစံပြောင်းသွားတယ် ။ ဝင့်ဝါ ပြောင်းလိုက်တာပါ..။ ကျွန်တော်…ဝင့်ဝါ ခြေထောက် အောက်ဖက်
ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ…ဝင့်ဝါရဲ့ လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်က သူ့ ရဲ့ ဒူးထောင်ပေါင်ကားဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံမှာပဲ..တံကောက်ဝတ်နှစ်ခုကို သူ့ ဟာသူ ဆွဲဖြဲပြီး မကိုင်ပလိုက်တော့ တင်သားတွေက ခုတင်ပေါ်က နည်းနည်းလွတ်သွားတယ် ။ ဖြစ်သွားပုံက……ခုနက စိနေတဲ့ ဖုတ်ဖုတ် နုတ်ခမ်းသားတွေက..ဆွဲပြီးမတင်သလို ဖြစ်သွားပြီး ဖတ်ကနဲ ကွဲသွားတယ်… အရည်လေးတွေ က အပေါက်ဝမှာ စိုစွတ်နေတယ်..။စက္ကန့် မခြားပဲ..ဖြစ်သွားတာက..ကျွန်တော် လက်နှစ်ဖက်…..ဝင့်ဝါရဲ့ ပင့်တင်ထားတဲ့ ပေါင်ရင်းအောက်ဖက်သားနှစ်ဖက်ကို ဖိကိုင်လိုက်တယ်…ကျွန်တော့ ခေါင်းက အလိုက်အလျှောက် ငုံချလိုက်ပြီး….ရွံရကောင်းမှန်း မစဉ်းစားတော့ပဲနဲ့ဝင့်ဝါရဲ့ ဖင်ဝကနေ အပြားလိုက်….လျှက်ချမိသွားတယ် ။ ပြီးတော့ ဆက်တိုက်ဆိုသလိုအဆက်မပြတ် လျှက်ချမိတယ်…ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဝင့်ဝါ ရဲ့ ဖုတ်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို ကိုယ့်ချစ်သူနှုတ်ခမ်းအလား ကစ်ဆင်ဆွဲနေမိတယ်….။ ဝင့်ဝါရဲ့ ငြီးတွားသံတွေက..ပိုပြီး…လျှက်ချင်လာအောင်...တွန်းအားတွေပေးနေတယ် ။ တစ်ခါတစ်ခါမှာလဲ……." အား..အ…….သေပြီ…ကောင်းတယ်.."သက်ပြင်းတွေ ချတယ်…။ အံကြိတ်သံတွေလိုလဲပါတယ်…။ ဒါပေမယ့် ဝင့်ဝါရဲ့ လက်တွေကတော့ သူ့ တံကောက်ဝတ်ကို ကိုင်ထားတာကတော့ လုံးဝကို မလွှတ်ဘူး……ပြီးတော့ မြတ်လိုလဲ ကျွန်တော့််ခေါင်းကိုလဲ လုံးဝလက်တွေနဲ့ဆံပင်လာဆွဲတာမျိုးလဲမလုပ်ဘူး…position လုံးဝကို မပျက်တာ…။ကျွန်တော် ဝင့်ဝါဖုတ်ဖုတ်ကို လျှက်နေရာကနေ….မျက်လုံးပင့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ကိုမင်းမျက်လုံးတွေက..ကျွန်တော်လျှက်နေတာကို သေချာထိုင်ကြည့်နေတာ ။ တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်ပြီး ပေါင်ကြားမှာလဲ ဘီယာပုလင်းကြီးကို လက်တစ်ဖက်က ကိုင်လို့ .. ။ ကျွန်တော်ပုံက သူ့ မျက်လုံးထဲ ဘယ်လို နေမလဲတော့ ကျွန်တော်..မသိဘူးသူ့ မိန်းမကို အားရပါးရ မှုတ်ပေးနေတာကို ကျေနပ်အားရစွာ ကြည့်နေပုံနဲ့ " ကိုဝေလင်း…"" အွန်း...."" ဝင့်ဝါနေချင်ပြီ…ထည့်ပေးတော့……"ကျွန်တော်..ကိုမင်းကို အလန့် တကြားကြည့်လိုက်တော့….ခေါင်းညိတ်ပြတယ် ။ ကျွန်တော်လဲ ပုဆိုးကိုချွတ်ပြီး…အတွင်းခံတွေကိုပါ…တစ်လက်စတည်း ခပ်မြန်မြန် ချွတ်ချလိုက်တယ်..ပြီးတော့ ဝင့်ဝါရဲ့ ပေါင်ကြားမှာဆောင်ကြောင့်လေး ထိုင်ပြီး…ကျွန်တော်ရဲ့ မပျော့မမာ ဖြစ်နေတဲ့…လီးကို ကိုင်ပြီးဖုတ်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို….ဒစ်ဖျားလေးနဲ့ …အလျားလိုက် စုန်ဆုန်ပြီး….ပွတ်ပလိုက်တယ် ။ ကျွန်တော်က အရက်သောက်တာ လစ်မစ်ကျော်သွားရင်.စစချင်း အရမ်းမတောင်တော့ဘူး…..လုပ်နေရင်းနဲ့ မှ မာလာတတ်တယ်…။ကျွန်တော်..အဖျားကနေ သေချာ..ထိန်းပြီး လက်မနဲ့ ဖိပြီး ဖိသွင်းလိုက်မှ စိုစွတ်နေတဲ့ ဝင့်ဝါရဲ့ တွင်းဝထဲ ထိပ်ဖျားလေးဝင်သွားတယ် ။ ဒါတောင် သူသေချာ ပေါင်ဖြဲထားလို့ ဝင်တာ…မပျော့မမာနဲ့ ကအရမ်းကျပ်နေရင် သွင်းလို့ မရဘူး ။ ပြီးတော့ အဖျားဝင်သွားတော့ .မချော်သွားအောင် လက်နဲ့ ထိန်းကိုင်ပြီး…ဖိထည့််လိုက်တော့မှ..တစ်ဝက်လောက်က တင်းပြီး ဒစ်ဖျားကို အရည်ပြားဆွဲတင်းသလို ဖြစ်ပြီး…..ဝင်သွားရှာတယ်…။အဲနောက်မှ…..ရှေ့ တိုးနောက်ဆုတ် ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်မှ .ဏနေတော့ ဒင်ပြည့်ကျပ်ပြည့် မာလာတယ်..။ကျွန်တော်လက်နှစ်ဖက်ကို….ဝင့်ဝါရဲ့ ဘေးတစ်ဖက်စီကို ထောက်ပြီးတော့…ခြေထာက်နှစ်ဖက်ကို ကွေးထားရာကနေ ..ဆောင့်လို့ ကောင်းအောင်..နည်းနည်း အောက်လျှောပြီး ပုံစံပြင်လိုက်တယ်….။ တစ်ချက်ချင်း ကျွန်တော်ဆောင့်တယ်..။ ဝင့်ဝါရဲ့ မျက်နှာ အပြောင်းအလဲ…မျက်တောင်မခတ်ပဲ..အဝင်အထွက်တွေကို ကြည့်လိုက် သူ့ မိန်းမမျက်နှာကို ကြည့်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ကိုမင်းကို ကြည့်လိုက်နဲ့ …ဆောင့်ချက်တွေ..ကျွန်တော် အားပါလာတယ်….နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုနေတဲ့ ဝင့်ဝါရဲ့ ဖုတ်ဖုတ်လေးက တစ်ချက်တစ်ချက် ညှစ်လိုက်ရင် ကျွန်တော်….ပိုမာန်ပါလာတယ်…တော်တော်လေးကြာအောင်…ဆောင့်ပြီးတဲ့ အခါကျတော့ ကျွန်တော်…အရည်တွေ တော်တော်များများ ဝင့်ဝါဖုတ်ဖုတ်လေးထဲ..ပန်းထည့်လိုက်တယ် ။အဲ့ဒီတော့မှ.ဝင့််ဝါရဲ့ လက်နှစ်ဖက်က တံကောက်ဝတ်ကို ကိုင်မပေးထားတာကို လွှတ်လိုက်တယ် ။ ကျွန်တော်လဲ အားကုန်သလို ဖြစ်သွားပြီး ဝင့်ဝါပေါ် လှဲချလိုက်တယ်..။ ဝင့်ဝါရဲ့ အကျီင်္အောက်က နို့ နှစ်လုံးပေါ်…မျက်နှာအပ်မိတယ်…။ ကျွန်တော် နို့ တွေတောင်…မကိုင်ရသေးပါလားလို့တွေးလိုက်မိတယ် ။ဝင့်ဝါ အောက်ကနေ လေးတဲ့ ပုံပေါက်လာလို့ ကျွန်တော်..ဖယ်ပေးလိုက်တော့…လီးက ပလွတ်ဆိုပြီး ကျွတ်သွားတယ်…။ပြီးတော့
ဝင့်ဝါထလာတယ် ။ ကျွန်တော်ကတော့ ခုတင်ခြေရင်းမှာ..ခေါင်းရင်ဖက်ကို ခြေထောက်ဆင်းပြီး ထိုင်ချလိုက်တော့ ဝင့်ဝါ ထလာတယ်…။ နောက်တော့ အကျီင်္င်္ကို ဆွဲချွတ်ပြီး……..ကျွန်တော့်် မျက်နှာကို သေချာကြည့်တယ်…..။" ကိုဝေလင်း.."ကျွန်တော်ဝင့်ဝါ မျက်နှာကို သေချာပြန်ကြည့်လိုက်တယ်.." ဝင့်ဝါ သန့် ရှင်းရေးလုပ်ပေးမယ်နော် " ဆိုပြီး….လေးဖက်ထောက်လိုက်ပြီး .ခုနက သူ့ လုပ်ထားလို့ သူ့ အရည်ရယ်..ကျွန်တော့်လရည်တွေရယ် ပေပွနေတဲ့….ကျွန်တော့်လီးကို လာစုပ်ပေးတယ်..။ အဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်ကြားလိုက်တာက….." ဗွက် "ဆိုပြီးး….ဝင့်ဝါ လေးဖက်ကုန်းတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော့် လရည်တချို့ ကို အန်ထုတ်သံကို ကြားရတယ် ။ ဝင့်ဝါရဲ့ ခေါင်းလေးကို ကိုင်ပြီး စုပ်ပေးတာကို အရသာ ခံလိုက်တော့ခုနက ကျသွားတဲ့….ကောင်က ပြန်ထလာတယ်…ဖင်ဗူးတောင်း ထောင်နေတဲ့ ဝင့်ဝါနောက်မှာ….ရုတ်တရက် ပုဆိုးချွတ်ပြီး..နေရာယူလိုက်တာက ကိုမင်း…သူ့ မိန်းမရဲ့ ဖင်သားနှစ်ဖက်ကို သေချာကိုင်ပြီး..ဖြဲကြည့်တယ်…။အထဲမှာ…အရည်တွေ ကျန်သေးတယ်…ပြီးတော့ .ကျွန်တော်ထက် နည်းနည်း ပိုတုတ် ပြီး…ပိုမဲတဲ့ သူ့ လီးကို ကိုင်ပြီး ဝင့်ဝါ ဖုတ်ဖုတ်လေးထဲ ထိုးထည့်လိုက်တယ်…။" ဗွက်…ပလစ်..တစ်..တစ်…"ခုတင်ပေါ်မှာ…မိန်းမဖြစ်တဲ့သူက သူ့ စောက်ရည်တွေ နဲ့ ကျွန်တော်အရည်တွေ ပေပွနေတဲ့ ကျွန်တော်လီးကိုသေချာကိုင်ပြီး စုပ်နေချိန်မှာ…သူ့ ယောင်္ကျားက ကျွန်တော် ပန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ အရည် လက်ကျန်တွေနဲ့ သူ့ မိန်းမကို မက်မက်စက်စက် နဲ့လေးဖက်ထောက်လေးလုပ်လို့ …ကျွန်တော်.နားမလည်စွာနဲ့ လရည်တွေပန်းထုတ်မိတာက…." ဝင့်ဝါ……ဆောရီး…" ပါးစပ်ကထုတ်လိုက်မိတယ်..။ကျွန်တော် တောင်းပန်လိုက်တော့ဝင့်ဝါကတော့ အရည်တွေကုန်အောင်…ပါးလေးတွေခွက်လို့ ….လီးမကျွတ်အောင်စုပ်ပြီး မြိုချပစ်တယ်…။ကျွန်တော် သူ့ မိန်းမ ပါးစပ်ထဲ အရည်တွေ ထုတ်လိုက်တဲ့ အကြောင်းလဲသိကော ကိုမင်းရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေ..အားပါလာပြီး…ခဏနေတော့ပြီးသွားပြီး ဝင့်ဝါပေါ် မှောက်ခုံလေး လဲကျသွားတယ် ။ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားမှာတော့ လင်မယားနှစ်ယောက် မှောက်ရက်သားလေးနဲ့ ….ရမ္မက်ရဲ့ ညလေး…………ကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်……
နောက်တစ်နေ့ မနက်မှာတော့ အချစ်ရဲ့ မနက်ဖြန်တွေ တကယ်ရောက်လာမလားဆိုတာတော့ ...............ဲပြီးပါပြီ...။